नयाँ शक्ति पार्टीमा छाया मन्त्री तयार छन् | Ekhabaronline.com
| प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर २२, २०७३ 5:30:03 PM | 93 पटक पढिएको |
विसं. २००६ सालमा खोटाङ जिल्लाको रतन्छामा जन्मिएका मदन राई नेपालका सीमितमध्येका कृषि विशेषज्ञ हुन् । नेपालका ७५ वटै जिल्ला पैदल हिँडेर गरागरा चहारेका उनी ७२ देश पुगेका छन् । वैज्ञानिक कृषि प्रणाली र व्यवहारमुलक शिक्षामा जोड दिने राई पछिल्ला केही दशक यता सक्रिय राजनीतिमा छन् । ०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा खोटाङबाट स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लडेका उनी अहिले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालमा सक्रिय छन् । पार्टी संरक्षक तथा केन्द्रीय परिषद् सदस्यसमेत रहेका राई नयाँ शक्तिमा बिचार प्रतिपादकमध्येका एक हुन् । उनै राईसँग बाह्रखरीका लागि नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानी:
नयाँ शक्ति नेपालले अहिले के गरिरहेको छ ?
पहिलो चरणमा हामी संगठनको प्रचारप्रसारमा थियौं । जेठ ३० गते करिब करिब जनसमर्थन प्राप्त भयो । नयाँ सोच र तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरुले सपथ लियौं । त्यसपछि प्रणाली विकासमा लागेका छौं । जनताले चाहेको उमेदवार उठाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न र राणाको पालाको सिन्डिकेट प्रथा अन्त्यका लागि प्रणाली विकासमा लाग्यौं । अहिले यसको पनि अन्तिम चरणमा छौं ।
जनसमर्थन प्राप्त भयो भन्ने आधार के हो ?
विभिन्न राजनीतिक दलबाट ठूलो संख्यामा हाम्रो पार्टीमा आउनु भएको छ । त्यसबाहेक ठूलो जमातले हामीलाई जनसमर्थन जेठ ३० गते नै दिएको छ । संगठन बिस्तारका क्रममा गाउँ गाउँमा ठूलो जनलहर नै छ ।
जनसर्मथन पायौं या पाएनौं भनेर जाच्ने कसी त चुनाव हैन र ?
हो । तर, हामी त्यहाँसम्म पुग्दैछौं । भर्खर आठ महिना भयो । तर, यसबीचमा हामीबाट धेरैले धेरै अपेक्षा गर्नुभएको छ । यो नै जनसमर्थन छ भन्ने आधार हैन र ? देशको समृद्धिका लागि नयाँ शक्तिलाई जनताले हेर्न चाहेका छन् । देशको विकासका लागि एकपटक बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व चाहिएको छ ।
आठ महिनामा तपाइँहरुले के गर्नु भयो त ?
यो र यति काम गर्यौँ भनेर भन्न हामी सरकारमा गएका छैनौं । हामी सरकारमा थियौं भने तपाइँले पनि सोध्न मिल्थ्यो । हामी त कसरी देश विकास गर्ने भनेर अहिले आन्तरिक खाका बनाउँदैछौं । त्यसका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
देश विकास गर्ने खाका तपाइँहरुसँग के छ त ? जो अरुसँग छैन ।
हाम्रो पार्टीमा विज्ञताका आधारमा को कहाँ बस्ने भन्ने विधानमा स्पष्ट छ । को कसको नजिक छ र कसले कसको चाकडी गर्छ त्यो नै उपल्लो तहमा पुग्ने जुन अहिलेको प्रचलन छ त्यो हाम्रो पार्टीमा हुने छैन ।
विज्ञताका आधारमा व्यक्तिले पद र अवसर पाउने छन् । हाम्रो पार्टीमा छायाँ मन्त्री तयार छन् । जस्तै मेरो भागमा कृषि पर्छ । कृषिको विकास कसरी गर्ने, कसरी वैज्ञानिक प्रक्रिया र प्रवृत्ति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । अर्थ अर्को कसैको भागमा पर्ला । उहाँले कसरी नेपालको अर्थ व्यवस्था उकास्न सकिन्छ त्यसको खाका उहाँले तयार पार्नु भएको छ । यो खाका हाम्रा छायाँ मन्त्रीहरुले तयार पार्नु भएको छ । तर म र रामेश्वर खनाल सरकारमा जाने अवसर आए पनि नजाने सोँचमा छौं ।
तपाइँ हाम्रो पार्टीमा कसैको निकटताका आधारमा कोही माथिल्लो पदमा पुग्न विधानले व्यवस्था गरेको छैन भन्नुहुन्छ । तर, भ्रष्टचारको आरोप लागेकालाई डा. भट्टराईले संरक्षण दिएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?
आरोप लाग्नु र प्रमाणित हुनु अलग अलग कुरा हुन् । आरोप मन नपरेकै आधारमा कसैले कसैलाई पनि लगाउन सक्छ । अदालतले प्रमाणित नगरेसम्म भ्रष्टचारी हो भन्न पनि मिल्दैन । र त्यसमा विश्वास गर्नु पनि हुँदैन । मान्छे सबै लोभीपापी हुन्छ । केही न केही स्वार्थ मान्छेमा हुन्छ । भोली म पनि भ्रष्टाचारी हुँला । त्यो विचारको भ्रष्ट पनि हुनसक्छ । पैसा पनि हिनामिना पनि हुनसक्छ ।
भोलीभन्दा पनि विगतमा पदीय दुरुपयोग गरेका व्यक्ति नै अहिले डा. भट्टराईका दाहिने हात भएर बसेका छन् भन्ने टिप्पणी सुन्नु भएको छैन ?
नेपालमा भ्रष्टाचार तहतहमा हुन्छ । यो सबैलाई थाहा छ । बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार भएको कुरा आएको थियो । त्यो उहाँले नै गर्नु भएको त हैन नि । उहाँको कार्यकालमा भएकाले उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिने पक्ष एउटा होला । तर, वास्तविकता त उहाँले गर्नु भएको हैन भन्ने नै हो ।
नयाँ शक्तिमा अनुशासन आयोग छ । प्रहरी केस लाग्नेबित्तिकै निलम्बन हुन्छ । प्रमाणीत हुनेबित्तिकै बर्खास्त हुन्छ । यसमा कसैले शंका गर्ने ठाउँ नै छैन । सबै आश्वस्त भए हुन्छ ।
नयाँ शक्ति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम समाजवादीसँग एकीकरणको हल्ला छ नि । कहिले एकता हुँदैछ ?
उपेन्द्र जिसँग मात्रै होइन । एजेन्डा र विचार मिल्ने सबैसँग एकता गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, यसका लागि सबैलै सम्झौता गर्नुपर्छ । कसले के र कति सम्झौता गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । एकता र विचार मिले हामी सबैसँग एकता गर्ने पक्षमा छौं । छलफल भइरहेको छ र निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं ।
तपाइँ लगायत केही नेता फोरम समाजवादीलाई एकीकरण हुन नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ रे नि ।
मैले अगाडि नै भने एकीकरणका लागि विचार र सिद्धान्त मिल्नुका साथै सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । हामी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न निश्चित भिजन लिएर हिँडेका छौं । कोही हाम्रो भिजनमा सहमत भएर आउँछ भने उसलाई हामी सँधै स्वागत गर्न आतुर छौं ।
यसको मतलब समाजवादी फोरम नयाँशक्तिको भिजनमा हिँड्न तयार भएको अवस्थामा मात्रै एकीकरणको सम्भावना छ भन्ने हो ?
अवश्य पनि । उहाँहरु हामीसँग सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्छ । पार्टी एकता हुनसक्छ ।
उपेन्द्र यादव आउँदा पदीय भागबण्डा कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
हाम्रो पार्टीमा पद नै छैन । हामी सबै जमिनमा छौं । बाबुराम भट्टराई एक जना संयोजक हुनुहुन्छ । बाँकी सबै सदस्य हो । धेरै पार्टीका अध्यक्ष जमिनमै हुनुहुन्छ । उहाँलाई पद नै चाहिन्छ भन्ने छ र ?
भनेको उहाँ पनि केन्दीय परिषद सदस्यमै बस्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको ?
हो । अरु पार्टीका अध्यक्ष यहाँ आएर सदस्य मात्रैमा बस्न हुने । अब आउनेले नहुने भन्ने त छैन । केही महिना पछि महाधिवेशन हुँदैछ । त्यसले सबै निर्धारण गरिहाल्छ । महाधिवेशनले बाबुरामलाई पनि हराउन सक्छ । उहाँ नै अध्यक्ष पनि हुन सक्नुहुन्छ । डराउनुपर्ने कारण नै छैन । केही समयका लागि त कुर्न सक्नुपर्छ नि ।
पार्टी गठन हुन नपाउँदै संस्थापक सदस्यहरु पार्टी छोडेर जान थाले तपाइँहरु कसरी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा सफल हुनसक्नु होला ?
एउटै घरमा दाजु भाइ र बावु छोराबीच त विचार मिल्दैन, झगडा हुन्छ भने हामी देशभरबाट एउटै विचार र सिद्धान्तमा हिड्छौं भनेर गोलबद्ध भएका छौं । यो ठूलो घरमा सबैको सबैसँग विचार मिल्छ भन्ने छैन । कोही असन्तुष्ट हुनसक्छ । पार्टी हो आउनेजाने क्रम त चलिरहन्छ नि । यो अरु पार्टीमा पनि भएको छ । यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था कही देख्दिन म ।
नयाँ शक्ति सिद्धान्त र दर्शनका हिसावले आफैं स्पष्ट छैन नि हैन ?
हैन । गतिशील लोकतन्त्र र जनसहभागितामुलक समाजवाद नै हाम्रो सिद्धान्त हो । यसमै टेकेर हामी अगाडि जाने हो । लोकतान्त्रिक र समावेशी विधान बनाएका छौं । सिन्डिकेट र टिका लगाउने चलनको अन्त्य भएको छ । यो हाम्रो नीतिलाई अरु दलले पछ्याएनन् भने हामीलाई जनताले भोट दिन्छन् ।
के भयो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ ?
गतिशील लोकतन्त्र र जनसहभागितामुलक समाबादको सिद्धान्तमा हिड्न सकियो भने हामीले देखेको समृद्ध नेपाल बन्छ । आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ । यसका लागि सडक सञ्जाल गाउँगाउँमा पुग्नुपर्छ । सडक भएपछि गरागरामा व्यवसायिक खेती हुन्छ । खोला खोलामा बोटो पुगेपछि सजिलै बिजुली निकाल्न सकिन्छ । सबैतिर सडक पुगेपछि कच्चा पदार्थ भएको ठाउँमा उद्योग खोल्न सकिन्छ । सडकसँगै पर्यटनलाई व्यवसाय बनाउन सकिन्छ । यी सबैका लागि सुरक्षा र काममुखी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सकियो भने समृद्ध नेपाल निर्माण हुनसक्छ ।